Waxay u egtahay inaad raaxo ku raaxeysaneysid kirismaskan | Ragga Stylish
Hadday ahaan lahayd la kulanka qoyska ama inaad ku raaxeysato fasax aad ugu qalmay xeebta ama buuraha, Kirismasku badanaa waa isku mid safarka. Sababta ay tahay sababta mid ka mid ah waqtiyada sanadka ee inta badan tijaabiya awoodda sameynta muuqaalka wanaagsan ee safarka.
Kuwa soo socdaa waa seddex fikradood oo ku siin kara dhiirigelin si aad u sameysid muuqaalladaas oo aad ku xiran doontid safaradaada gaari, tareen ama diyaarad Kirismaskan. Qaarkood waxay sidoo kale u muuqdaan inay tixgelinayaan fasaxyada usbuuca jiilaalka soo socda:
1 Muuqaalka safarka Preppy
2 Raadi isboortiga socdaalka
3 Roob-saaxiibtinimo muuqaal muuqaal ah
Muuqaalka safarka Preppy
Markaad abuureyso muuqaal preppy ah, tixgeli inaad ku bilowdo shaati leh badhanka hoosta (kan kan Polo Ralph Lauren ayaa ku habboon). Isku dar joonis jilicsan oo jilicsan iyo dharbaaxo si aad u hesho dheelitirka u dhexeeya saamaynta preppy iyo raaxada. Si aad u dhamayso, ku dar jaakad peacoat.
Raadi isboortiga socdaalka
Shaki kuma jiro taas tracksuits waa wax ku ool ah safarka. Laakiin muuqaal isboorti oo buuxa waxay u egtahay inuu adiga dib kuu dhigay. Marka ka fiirso inaad ku bedesho dhididka shaati-boodh leh oo aan badnayn oo aan cidhiidhi ahayn, sida keebkan xididka ah ee 'Pull & Bear'. Fikrad shaqeyneysa oo aan u hureyn qaab. Isku soo wada duub muuqaalka leh jaakad jaban oo caadi ah.
Roob-saaxiibtinimo muuqaal muuqaal ah
Haddii saadaasha hawadu ku dhawaaqdo safar biyo dhex mara, Ku billow qaabeynta muuqaalkaaga jaakad qotodheer oo casri ah, sida tan Mango. Raac xariiqda lagu calaamadeeyay gabalkan oo isku daraya qaybo aan caadi ahayn (T-shaati iyo isboorti) oo leh qaybo caqli badan (surwaal qafiif ah iyo kaarar la isku tolay).
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Saddex fikradood oo muuqaal ah ayaa u safraya Kirismaskan